Sidee Loogu Adeegsadaa Mawduucyada Telegram? ➡️ Raacayaasha ▷ ➡️
Sidee loo adeegsadaa mawduucyada Telegram?
April 27, 2021 0 comments 312
Ma jeceshahay inaad wax cusub curiso oo aad si kale u eegto wada hadalkaaga Telegram? Hadda waxaad fursad u leedahay inaad sameyso iyada oo ay ugu wacan tahay mawduucyada caanka ah ee ay bixiso barnaamijka farriinta deg dega ah ee caanka ah. Isticmaalayaashu waxay wax ka beddeli karaan gidaarka gidaarka waxayna doortaan mawduuca ay aadka u jecel yihiin.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad aad ugu feejignaato maqaalka soo socda oo aan kugu baran doonno sida ugu dhaqsaha badan uguna fudud ka hel mawduucyada ku jira barnaamijka iyo sida loo isticmaalo si fudud. Waxa kale oo aad baran kartaa inaad abuurto mawduuc kuu gaar ah hadba sida aad u kala jeceshahay.
Waa maxay mawduucyada Telegram
Mawduucyadu waa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee naqshadeynta in aan ka dhex heli karno arjiga Telegram. Noocyada noocan ah waxay noo oggolaanayaan inaan u qaabeyno muuqaalka muuqaalka ah ee sheekooyinkeena qaab madadaalo iyo soo jiidasho leh.
Waxaad haysataa ikhtiyaarka ah kala soo bax mawduucyada aad door bidayso iyo kuwa aad dareenkaaga u soo jiita, laakiin sidoo kale waad abuuri kartaa mawduucyadaada oo aad u isticmaali kartaa adigoon wax dhib ah qabin. Sidan ayaad fursad ugu heli doontaa inaad doorato midabada aad rabto in arjiga farriinta degdegga ahi ay lahaato.
Waa maxay mawduucyada ku jira Telegram
Qalabka noocan ah asal ahaan waxay ku dhasheen iyagoo ujeedkoodu yahay hagaajinta muuqaalka muuqaalka ee Telegram. Hadda adeegsadayaashu waxay ku ciyaari karaan hal-abuurkooda iyo mala-awaalkooda oo u abuuri mawduucyo xiiso leh dalabka.
Mawduucyadu waxay u adeegaan inay beddelaan muuqaalka muuqaalka wada-hadalkeenna, taasi waa, waxaad dooran kartaa midabka asalka ah ee aad ugu jeceshahay, iyo sidoo kale midabka muuqaalka leh iyo midka fariimaha la soo diri doono.
Abuur mawduuc Telegram kuu gaar ah
Ma dooneysaa inaad sameysato mawduuc kuu gaar ah oo ku saabsan codsiga Telegram? Markaa dheh intaa ka badan. Halkan waxaan ku tusaynaa habka ugu fudud ee aad ku samayn karto. Kaliya waa inaad raacdaa talaabooyinkan fudud ee aan hoos ku xusnay:
Furan dalabka mobilkaaga
dhagsii saddexda xariiq ee jiifka ah ama shaashadda ka mari bidix ilaa midig.
Guji xulashada "XARUNTA"
Qaybtaan waxaad ka heli doontaa dhammaan macluumaadka ku saabsan qaabeynta wada hadalkaaga Telegram. Halkan waxaad ku beddeli kartaa cabbirka farta, waxaad u dooran kartaa asalka sheekooyinkaaga oo aad wax ka beddeli kartaa naqshadeynta.
Laakiin aynu u daneyno: sida loo abuuro mawduuc noo gaar ah loona adeegsado qaab fudud:
Qeybta “theme”Waxaad heli doontaa fursado dhowr ah
Waxaad dooran kartaa midab guud loogu talagalay mawduuca (taariikh, maalin, madow, habeen, arctic)
Hoos waxaad ka heli doontaa mid liiska midabyo kala duwan leh. Dooro midka aad ugu jeceshahay inaad ugu adeegsato wada sheekaysigaaga.
Hadaad rabto inaad mawduuc wax ka bedesho kaliya waa inaad labalaabtaa midab
Tifatirka midabada mowduucyada horay loogu aasaasay arjigu waa mid aad u fudud. Kaliya waa inaad doorataa ikhtiyaarka dusha shaashadda (Muuji midabka, asalka, farriimahayga) oo aad ku doorataa hadba dookhaaga.
Waxaad u dooran kartaa midab gidaarka, mid si aad u muujiso badhamada iyo mid kale oo ah sanduuqyada aad ku qortid farriimaha. Mar dambe lagama maarmaan noqon doonto in la soo dejiyo mawduucyada dadka kale. Hadda waad habeyn kartaa mawduucyadaada.
1 Waa maxay mawduucyada Telegram
2 Abuur mawduuc Telegram kuu gaar ah
Sidee loo soo degsadaa Telegram ee pc?
Sidee loo dhejiyaa liistada twitter-ka?